We She Me: အပြောင်းအလဲတွင် စီးမျောပါ
MrDBA - 12/19/10, 2:39 PM
ကျွန်တော် စီးမျောဖို့ တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်နေတာခင်ဗျ။ အခုစာအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ZT - 12/19/10, 2:39 PM
အတွေးအခေါ် အသစ်တွေ ပတ်ဝန်းကျင် အသစ်တွေဆိုတာတော့ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါ။ လိုတာယူ မလိုတာပယ်ပြီးတော့ ရှေ့ဆက် သွားနေရမှာပါ။ နေဝင်းမြင့် ဝတ္ထုထဲကလို အရိုးစွဲ မနေဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
Mon Petit Avatar - 12/19/10, 3:05 PM
This post makes me think what I am standing for: neglect the change? go with the flow? or still reluctant to choose one?
ကိုပေါ - 12/19/10, 3:37 PM
မျောရတာ အရသာလား....း-)
Andy Myint - 12/19/10, 4:17 PM
@MrDBA - ကျွန်တော်လည်း စီးမျောဖို့ ရေကူးသင်နေတာ အခုအချိန်ထိပဲ ဆိုပါတော့
@ZT - အတွေးအခေါ်အသစ်တွေထဲမှာ အမှန်တကယ် စီးမျောဖို့ (ကျွန်တော့်လို Old School အတွက်တော့) အချိန်အတော်ယူရပါတယ်။
Same here, Mon Petit Avatar.
ဒီလိုပဲ ဘ၀ရေစီးကြောင်းထဲမှာ နစ်လိုက် မြုတ်လိုက်ပဲ ကိုပေါရေ။
Raymond.Kyaw Minn Naing - 12/19/10, 5:18 PM
မှန်ကန် သေချာတဲ့ အပြောင်းအလဲအတွက် လမ်းဆုံ လမ်းခွ မရှိပါဘူး ဆိုတာရယ် ရေမကူးတတ်ဘဲ မြစ်ထဲကို ခုန်ချသလိုမျိုး ရယ် ကြားကချင့်ချိန်ရင်း တွေဝေရင်း နဲ့ ၂၀၁၁ မကုန်ရင်တော်ပါပြီဗျာ..။ Anyway..ကိုအောင့် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်လေး ကကောင်းတယ်ဗျို့။ ၂၀၁၁ မယ် တစ်ခုခုတော့ လုပ်အုံးမှ။
Shinlay - 12/19/10, 7:37 PM
အပြောင်းအလဲတွေ ကို ရင်ဆိုင်လက်ခံနိုင်ဖို့အင်အားမွေးထားပါတယ်။
အကို တို့ မိသားစု နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာ၊ပျော်ရွှင်ပါစေ။
မန်းကိုကို - 12/19/10, 10:45 PM
ကို Andy ပြောတာ မှန်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေအထားနဲ့ကျတော့ လွဲတယ်ပြောလို့ မရပေမယ့် အံနည်းနည်း ချော်နေသလိုပဲ။
ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်းကို ကိုယ်သွားနေတယ်လို့ ထင်မိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကင်းကွာလို့ မရလို့ပဲလားတော့ မပြောတတ်ဖူး ကိုAndy ပြောတဲ့ အထဲမှာ အလိုလိုစီးမျောနေမိရက်သား ဖြစ်နေပြန်ရော။
တခါ ဒီလိုစီးမျောနေရာမှာ ကိုယ့်ကို အများနဲ့ရောပြီး တံဆိပ်လာကပ်တာမျိုးကျတော့ လက်မခံချင်ပြန်ဘူး။ ဆက်ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်တော့ အချိန်အတော်ယူရမယ်ထင်တယ် :-)
Moe Cho Thinn - 12/20/10, 4:38 AM
အပြောင်းအလဲကို လက်ခံရမှာပေါ့။ ကိုယ်တိုင် စီးမျော ပါဝင်တာကတော့ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲတွေသာ ဖြစ်ပါစေလို့ပဲ။ ဒေါ်စု လွတ်မြောက်တဲ့ အပြောင်းအလဲမျိုး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ချွင်းချက်မရှိ အားလုံး လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အပြောင်းအလဲမျိုးကိုတော့ ပါဝင်စီးမျော တောင့်တ မိပါတယ်။
ကိုပေါ ကွန်မန့်လေး ရီသွားတယ်။
Andy Myint - 12/20/10, 2:25 PM
“တစ်ခုခုတော့ လုပ်ဦးမှ” ဆိုရင်တော့ မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ရမှာမို့ လုပ်တာထက် တကယ်လုပ်စရာ တစ်ခုကို လုပ်လိုက်တာ ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ် ကိုချော။
@Shinlay - နှစ်သစ်မှာ အပြောင်းအလဲတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ။
@မန်းကိုကို - ပြောတာကို ကျွန်တော် သဘောပေါက်သလိုလိုတော့ ရှိပါတယ်။ စာကလည်း ပုံမှန်အခြေအနေနဲ့ လူတွေ မျက်စိရှေ့မှာ ဖြစ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေမှာ “အမှန်တကယ်” ပါဝင်စေလိုတာပါ။ ကိုယ့်လမ်းကြောင်း ရှိပြီးသား စီးမျောပြီးသားဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးတွေးနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် မချိုသင်း.. ကျွန်တော်လည်း စာစီစာကုံး ဆန်သွားမှာစိုးလို့ မကောင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေမှာတော့ မစီးဆင်းဖို့ မရေးလိုက်ရဘူး။ ခက်တာက မကောင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို စီးမျောဖို့ သိပ်ကိုလွယ်နေတာ။ မကောင်းမှုမှာ ပျော်ရွှင်တတ်တယ်ပဲ ဆိုပါတော့။
Anonymous - 12/21/10, 10:06 PM
"ထွက်ပေါက် စင်္ကာပူကို ရှိပြီးသား နာမည်နဲ့ ၀ိတ်နဲ့ သုံးပြီး ပ်ိတ်ချင်တာတွေ တွေ့ရတော့".....
I am at lost and which clowsn did it?
Will you bother to point the web link
for above? Cheers!
Andy Myint - 12/22/10, 9:58 AM
I reckon I am in no position to name suchasenior writer though I dislike (besides my main intention that not to dishearten people who wants change). He is one of the famous and top columnists in best-selling journals in Burma writing on current affairs. He once bad-mouthed Singapore just to butter up the authorities.
Anonymous - 12/23/10, 10:49 PM
Well said, your answer is not helpful but
fair enough. Although I prefer naming and
shaming any wanker or wankeress who thinks
that that little island needs us more than
our countrymen need it. I have seen in some blogs too! Either out of emotion or sheer foolishness, they have claimed (blogged)that
when the time comes, when their era arrives
- I did not know what do they mean by their
era, so I assume they mean an era in which
they will lead Burma, which they'd hope to
happen soon in future - they will not let
Burmese go and work there in island. I was
not feeling amused but amazed and appalled
for the ingenuity of their dick heads. No
wonder while the military regime leaders
are fools, those in opposition either in
borders or third countries are dick heads
too. Now I have learned that there are some dick headed columnists in local journals,
I thought they are only at Irrawaddy and
Yes I agree with you that our unemployment
figures will be soared, our graduates will
no longer get meaningful employment, if that
door is closed. May I suggest you should be
a columnist (for part time) instead of that young fool or old fart author who suggested
that idea. Cheers!
Anonymous - 12/24/10, 12:32 AM
If Ko Andy is saying about လူထုစိန်ဝင်း , is this the article http://mayaonlinemagazine.blogspot.com/2010/06/blog-post_2718.html ? Or မောင်စူးစမ်း?
Anonymous - 12/24/10, 11:36 AM
Some are clueless small frogs in little ponds!
I remember one author wrote, there are no trees
bigger than Papaya tree (Thin Baw)in Singapore.
I read that in Shwe Myanmar magazine in 2003/4.
I was thinking, there are longer trees with fat
trunks to be shoved into his backside. I think
web bloggers become better than those authors.
rose - 12/24/10, 9:36 PM
ရို့စ် ဘလော့ဂ်လေး စမရေးခင်တည်းက We She Me နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ စာတွေ လာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ကွန်မန့်တော့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကိုအန်ဒီနှင့် ဇနီး မျှဝေပေးတဲ့ ချက်နည်းပြုတ်နည်းလေးတွေလည်း လာဖတ်နေကျ။
နှစ်သက်တယ် ဒီစာသားလေးတွေ "၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၁ ပြောင်းသွားမှာ အများနဲ့အတူ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ အမှန်တကယ် ပါဝင်သလို ထင်ရပါတယ်။ ပါဝင်တယ် မ၀င်ဘူး တကယ်တန်း အဆုံးအဖြတ် ပေးမှာကတော့ ၂၀၁၁ အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ထားသလားပါပဲ"
kaphyo - 1/1/11, 6:03 PM
kaphyo - 1/1/11, 6:11 PM
Bro, I read this post i remember one of ur post Colour and Trend. I keep good trend and reduced my bad trend, but until i didn't get good colour from anyperson. Whatever I must be sailing year by year. Thanks for this post.
Remarks: i dont want to swim bro :D...
Happy New Year Bro, I hope your family will be happy and healthy in the whole life :)
Anonymous - 1/5/11, 1:50 PM
I really recommend your thoughts.
But I understand that all of minds and thoughts about changing font to Unicode.
I amagraduated from UCSY and old student from (Hlaing Campus).But, currently far away from my mother country.
I always remember for our student life in UCSY Hlaing Campus.
At that time, we was tried to change for Unicode system and we was tested in lab and ending in thesis.But, nobody interested to change.
I also appreciate our next generation IT professionals for interesting in Unicode.
I saw some of minds and thoughts in http://www.myanmartutorials.com web site.
Anonymous - 1/8/11, 12:43 AM
အပြောင်းအလဲ ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ အပြဲအလောင်းပါပဲ။
ဒီက ဥာဏ်မရှိ ကံမရှိတိုင်းမွဲ မို့ ဒီလောက်ပဲ တွေး နိုင်တယ်။ ဟီး..